‘नयां उद्यमीलाई काम गर्नको लागि सहजीकरण गरिरहेका छौं’ - गोपाल खनाल
जनतापाटी आइतबार, माघ ११, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौँ । नेपालको वैंकिङ र शैक्षिक क्षेत्रमा चिरपरिचित नाम हो–गोपाल खनाल । मेघा वैंकको संस्थापक, मेघा कलेज र एशिया पब्लिकेशन्सका अध्यक्ष रहेका खनाल केही समय अघि भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनबाट केन्द्रिय सदस्य र उर्जा तथा वातावरण समितिको सभापति निर्वाचित भएका छन् । प्रस्तुत छ, खनालसंग गरिएको कुराकानीको सार संक्षेपः
महासंघको उर्जा तथा वातावरण समितिले आफ्नो उर्जा के मा कसरी लगाइरहेको छ ?
-यो समिति भरखर गठन भएको हो र यसका सबै सदस्यहरुको मनोनयन पनि भैसकेको छैन । तर, हामीले केही योजना बनाएर काम गर्न शुरु गरेका छौं । नामैले नै हाम्रो समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुन्छ । त्यो भनेको हामीले नेपालमा उर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्याउने हो । २०७५ फागुनदेखि पिपिए रोकिएको छ । त्यो खुलाउनको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौं । केही समय अगाडि नयां उर्जामन्त्री आउनु भएको छ । उहांले १५ गतेपछि भेटेर केही गर्नु पर्छ, गरौंला भन्नु भएको छ । त्यही अनुसार हामीले उर्जा क्षेत्रमा लगानीको वातावरण सृजना गर्न आन्तरिक तयारीहरु गरिरहेका छौं ।
उर्जामन्त्रीले कुरा सुनिदिएको भरमा काम हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
-हामीले गर्ने एउटा काम त्यही हो । सरकारी निकायलाई लगानी र प्रतिफलको लागि यहां यहां यहां यस्ता समस्याहरु छन्, ती समस्या यसरी हटाइदेउ भनेर तथ्यगतरुपमा जानकारी दिने र खबरदारी गर्ने हो । आवश्यक मात्रामा विभिन्न मन्च र फोरमहरु प्रयोग गरेर सरकारलाई दवाव दिने हो ।
सरकारको काम कारवाहीप्रति चित्त नबुझे पनि सडकमा गएर टायर बाल्ने, ड्याङडुङ गर्ने काम हामीले गर्ने कुरा हुंदैन । उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो जिम्मेवार संस्थाले विरोधको नाममा सडकमा गएर नारावाजी गर्ने भन्दा पनि विभिन्न फोरमहरु प्रयोग गरेर सरकारलाई व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न दवाव दिने हो । त्यो काम हामीले शसक्तरुपमा गर्छाै ।
लगानीको वातावरण ठप्पै भएको हो ?
-अहिले पुराना प्रोजेक्टहरु त थला नै परेका छन् । तर, त्यही विचमा पनि होटल, गार्मेण्ट लगायतका क्षेत्रले विस्तारै आफूलाई टिकाउने प्रयास गरिरहेका छन्, कतिपय व्यवसायहरु घिटिघिटी तरिकाले चलिरहेका छन् । हामीले त्यसरी घिटिघिटी तरिकाले चलेका व्यवसाय र उद्यमहरुलाई भन्दा पनि नयां सोंचका साथ अगाडि आएका व्यवसायहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ ।
नेपालमा त्यसरी नयां व्यवसायको संभावना पनि देखिएको छ । कस्तो खालको नयां व्यवसाय भन्ने हुन सक्छ, त्यो चांही व्यक्तिमा भर पर्छ । तपाईले कस्तो ‘आइडिया’ले व्यवसाय शुरु गर्नुुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । अहिले युवाहरुले नयां नयां तरिकाले व्यवसाय शुरु गरेका छन् र त्यसलाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने लगानीको वातावरण वन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
तपाई महासंघको उर्जा तथा वातावरण समितिको सभापति, मसंग व्यवसायको लागि राम्रो आइडिया छ, तर लगानीको लागि पैसा छैन । म तपाई कहां आउंछु, के सहयोग गर्नुहुन्छ ?
-व्यक्तिगतरुपमा लगानीको व्यवस्थापन गरिदिने भन्दा पनि तपाईले गर्न लागेको व्यवसायको संभावना र चुनौतिका अवस्थाको बारेमा हामी तपाइलाई ‘गाइड’ गर्छाैं । तपाईलाई सहयोग गर्ने निकाय र क्षेत्रहरु के के हुन् र ती कहां कहां हुन् हामी तीसंग समन्वय गरिदिन्छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तो कुनै पनि व्यवसायीक संस्थाले गर्ने भनेको त्यही हो ।